जर्मनीबाट कमलको प्रश्न- के नेपालकी राष्ट्रपति महिला नै हुन्? – Karnalisandesh
जर्मनीबाट कमलको प्रश्न- के नेपालकी राष्ट्रपति महिला नै हुन्?
प्रकाशित मितिः २९ कार्तिक २०७७, शनिबार ११:०९ November 14, 2020
जुम्ला। जर्मनीबाट एक नेपालीले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई खुला पत्र लेखेका छन्।
हाल जर्मनीमा रहेका हुम्ला सर्केगाढ २ रिपका कमल महताराले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पत्र लेखेका हुन्। महताराले नेपालमा महिला राष्ट्रपति हुँदा पनि बलात्कारीलाई सजाए हुन नसकेको बताउँदै नेपालमा हाल साच्चै महिला नै राष्ट्रपति छन् त ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्,‘महिला राष्ट्रपति भएको देशमा छोरी चेलीहरु सुरक्षित नहुनाले तपाईंमाथी नेपाली जनताको ठाडो प्रश्न उठेको छ। के नेपालको राष्ट्रपति महिला नै हुनुहुन्छ ? यदि तपाईं साच्चै महिला हुनुहुन्छ भने खै त बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय ? पीडितलाई न्याय?’
देशको सर्वोच्व पदमा पुगेकी भण्डारीलाई नेकपाको लागि सदासयाता देखाउने, आसक्त चासो राख्ने, महंगो जीवन यापन गर्ने र श्रीमानको घटनाका बारेमा कुनै पहल नगरेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्।
महताराको राष्ट्रपतिलाई खुला पत्र
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू ,
लस्करौं सुरक्षा गार्डहरु राखेर सुख सयल र विलासी जीवन बिताइरहेकी तपाईलाई हालखबर कस्तो छ भनेर सोध्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। रेसम किराको कोयो भित्र बस्ने कोलोनी सायद सधै सुरक्षित र सुखी नै रहन्छ। त्यसैले, म हजारौं नेपाली आमा, दिदि र बहिनीको खबर पाउनका लागि मात्र यो पत्र हजुरलाई लेखेको छु। मलाई थाहा छ, तपाईंकै परिवेशमा रहेका नेपाली चेलीको पीडा र व्यथा त हजुर सामु पुग्दै पुग्दैनन् र पुगे पनि ति पिडा र व्यथाहरु कथामै सिमित रहन्छन्। तर, पनि प्रदेशबाट लेखेको यो पत्रको संन्देश हजुर सामु पुग्छ कि भन्ने झिनो आशा गरेको छु।
समयको व्यस्तता र स्थितिका कारणले सामाजिक सञ्जालसँग नजोडिएको अलि धेरै नै भयो। तिहार नजिकिदैँ गर्दा मेरो मनमा अघिल्लो वर्षको दिदीको सप्तरंगी टिकाको याद आयो र यसपल्टको तिहारको चहलपहल थाहा पाउन बिहानै उठेर फेसबुक खोले। फेसबुकको सबैभन्दा पहिलो पोस्टमा थियो गोठाटारमा ७ वर्षिया बालिका बलात्कृत।
तिहारको माया र दिदीबहिनीको सप्तरंगी टिकाको यादले खोलेको फेसबुकको सुरुवातमै यो समाचार देख्दा मन उथलपुथल भयो, अनि टिका लागाउन तयार रहेकी हजारौं नेपाली चेलीको हात खाली रहन्छ कि भन्ने डर मनमा छायो। सप्तरंगी टिका किन्न बहिनी चोकमा निस्कदाँ सुरक्षित साथ फर्किन्छिन् कि नाई ? भनेर डर लाग्यो। मेरो पल्लो घरकी सानी बहिनी तल्लो गाउँका दाजुलाई टिका लगाउन जाँदा सुरक्षित साथ पुग्छिन कि पुग्दैनन् भन्ने चिन्ता लाग्यो। राष्ट्रपति ज्यू, तपाईका सामाजिक सञ्जालमा छोरी, चेलीहरुका बलात्कार र हत्याका घटनाहरु आउँछन् कि आउदैनन् थाहा छैन। तर, मेरा सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार र हत्याका समाचारहरु मात्र आउँछन्।
बुबा द्वारा छोरी बलात्कृत, वर्षीया छात्राको आफ्नै शिक्षकद्वारा बलात्कार, दाजुको मिलेमतोमा बहिनीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या वर्षीया बालिका आफ्नै काकाबाट बलात्कृत, राष्ट्रपति ज्यू, मेरा फेसबुकका भित्ताहरु यस्तै यस्तै समाचारले भरिन्छन्। तपाईंको दुई वर्षको कार्यकालमा मात्रै ४ हजार ४ सय ७४ जना चेलीहरु बलात्कृत भएकी छिन्। जसमध्ये १३ जना बालिकाहरुको बलात्कारपछि हत्या भएको छ।
लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र नेपाल, जहाँ महिला राष्ट्रपति छिन र दिनैपिच्छे बलात्कारका घटना घट्छन्। महिला राष्ट्रपतिको कार्यकालमा छोरीचेलीहरु सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। विद्यालय गएकी छोरी साँझ घर फर्किन्छे कि फर्किन्न थाहा छैन। घाँस काट्न गएकी सानी सुरक्षितका साथ फर्किन्छे कि फर्किन्न थाहा छैन। आफै सोच्नुस त राष्ट्रपति ज्यू ? यो भन्दा लाजमर्दो र घिनलाग्दो कुरा अरु केहि हुन सक्छ?
महिला नै राष्ट्रपति भएको देशमा छोरी चेलीहरु सुरक्षित नहुनाले तपाई माथी नेपाली जनताको ठाडो प्रश्न उठेको छ। के नेपालको राष्ट्रपति महिला नै हुन्? यदी तपाई साँच्चै महिला हुनुहुन्छ भने खै सजाय (फाँसी) बलात्कारीलाई ? तपाईं पो लावालस्कर सुरक्षा गार्डको बिचमा हुनुहुन्छ, खै अरु छोरीचेलीको सुरक्षा? खै कहाँ छ लोकतान्त्रिक नेपालमा नारीको स्वतन्त्रता? के अबका छोरीचेलीले यसरी नै बुबा, दाजु, काका, गुरुहरुबाट डराएर बस्नु पर्ने हो? यदि छोरीचेलीहरु पुरुषसँग सधैँ यस्तै डर र सन्त्रासमा बस्ने हो भने भोलिका छोरीचेलीहरुमा पुरुष फोबिया हुन्न भन्न सकिन्न।
त्यसैले राष्ट्रपति ज्यू, नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउनु पर्दैन, मात्र नेपाललाई नयाँ नेपाल बनाई आफुलाई महिला साबित गर्न बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन बनाउ। छोरीचेलीलाई स्वतन्त्रता र सुरक्षा देउ। लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र नेपालको नाम बचाऊ। त्यसपछि तपाईको जयजकार मात्र होइन, तपाईको नाम शिलालेख र ईतिहासका पानामा लेखिने छ। हैन भने छोरीचेलीहरुले तपाईको मुखमा थुक्न र सडक, चोक र गल्लीहरुमा तपाईको पुत्ला जलाउन बाध्य हुनेछन्।
सर्केगाड २, रिप हुम्ला